AutoDesk waxay muujin doontaa sida ugu fiican ee RasterDesign - Geofumadas
AutoDesk ayaa ku tusi doonta sida ugu fiican ee RasterDesign
Tani, iyada oo loo marayo barnaamijka kumbuyuutarka ee online-ka ah ayaa muujinaya warbxinta alaabooyinka ku takhasusay daaweynta sawirada; Isticmaalayaasha way ka qaybgali karaan wadahadalka waxayna waydiin karaan su'aalo ku saabsan soojeedinta, iyaga oo aan ka tegin guryahooda ama xafiiska.
Ka qeyb waa mid fudud, waxa kaliya ee aad u leeyihiin in ay guji xiiso Webcast saxiixa iyo ka hor webcast ka heli doontaa fariin xaqiijin ah la password iyo macluumaad loo baahan yahay in ay ku xidhmaan iyo ka qayb dhacdo.
Bedelaan oo u habeeyaan qaabab kala duwan oo muuqaal ah, qorshooyinka la isku sawiray, sawirada muuqaalka iyo sawirada dayax gacmeedyada leh AutoCAD Raster Design
Taariikh iyo waqti:
2 Oktoobar 2008 Khamiis
laga bilaabo 12h ilaa 13h
Maxaa laga filan karaa bogga:
Baro sida AutoCAD Raster Design (oo horay Acad dahaadhaa) fidiyaa xoogga AutoCAD iyo waxyaabaha AutoCAD ku salaysan, sida AutoCAD Map 3D.
Waxyaabaha kale, AutoCAD Raster Design aad edit karaa oo nadiif ah xogta raster aad, badalo raster in dulinka, bandhig iyo falanqaynta xogta raster iyo images geedi socodka.
Wixii su'aalo ah, waxaad la xiriiri kartaa Xarunta Wicitaanka 902 12 10 38.
Post Previous«Previous Sidee ayay ahaayeen markaas
Post Next Isbarbardhiga u dhaxeeya Geomedia iyo GvSIGNext »
4 Jawaab "AutoDesk waxay muujin doontaa sida ugu fiican ee RasterDesign"
Waxaan jeclaan lahaa in aan u fidiyo kaliya qaab cayiman oo keliya oo buuxiya dhumuc gaar ah. Waa suurtagal in la sameeyo tan Raster Design
Waxaan maleynayaa inaad leedahay AutoDesk 3D. Iyo in khadadkaaga boggaga elektiroonigga ah ay ku leeyihiin hantida kor u qaadista cabirka loo kala leeyahay.
-Waxaad tagtaa meesha ku taal dhinaca bidixda, halkaa waxaad abuureysaa dusha cusub
- marka la eego xulasho loo yaqaano Qeexidda waa in la abuuro dusha sare.
-Waxaa jira astaanta lagu magacaabo Contours, waxaad xaq u riixdaa oo doorataa ikhtiyaarka dheeraadka ah.
- Markaa waxay ku weydiineysaa inaad doorato polylines-kaaga oo ah heerarkaaga heerarkaaga, waxana ay dhalin doontaa heerarka heerarka ee ku saleysan polylineskaaga.
BREZNER PIO isagu wuxuu leeyahay:
KALA DUWAN WAXYAABAHA LIISKA HESHIISKA, KUWA BADAN U DIYAARSAN DIYAARIYADA HUBINTA IYO HORUMARINTA HORUMARINTA. SIDEE AYAAD KA HELI KARAA TALAANKAN?
poussette pas cher isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa in bloggaagu u baahan yahay template wordpress cusub. Downalod de, Goobtaasi waa mid fiican iyo